Thenga iBitcoin e-i-Bolivia | iPaxful
Thenga i-Bitcoin ngokushesha ku-i-Bolivia
Enye yezimakethe ezivikeleke kakhulu ze-peer-to-peer Bitcoin isiyatholakala e-Bolivia! Shintsha ngokushesha i-Boliviano (BOB) yakho ibe yi-BTC usebenzisa izindlela zokukhokha ezingaphezu kwezingu-300 ezitholakala enkundleni. Ongakhetha kukho kuhlanganisa i-PayU, Mercado Pago, Western Union, International Wire Transfer (SWIFT), Skrill, PayPal, amakhadi esipho, ukuthumela imali ngebhange, kanye nokunye okuningi.
Ungathenga i-Bitcoin ezinkulungwaneni zabahwebi ngaphakathi e-Bolivian nasemazweni angaphandle. Ukuze yenze ukuhweba kwakho kuzuzise futhi kuvikeleke, i-Paxful ivikela imali yakho ngokuqinisekisa nge-two-factor (2FA), ukuvikeleka okuqinile kwenkundla yalo, futhi kudinga ukuqinisekisa i-akhawunti kubo bonke abadayisi bayo.
Qala uhambo lwakho lwe-Bitcoin ngokuvula i-akhawunti ye-Paxful uma ungakakwenzi lokho. Uzothola isikhwama semali samahhala se-Bitcoin ngemva nje kokubhalisa ukuze ukwazi ukuqhubeka. Ukujoyina umphakathi okhulayo wemali eyidijithali emhlabeni kulula kakhulu. Uhwebe kamnandi!
Okuthengiswayo okuphezulu kwe-I-Bolivian Boliviano e-i-Bolivia
103.00-667.00 BOB 103.00 BOB $0.83 Thenga 176,500.07 BOB Thenga Thenga
Izindlela zokukhokha ezihamba phambili e-i-Bolivia
Siza abanye abantu e-i-Bolivia bathole i-Bitcoin futhi ungathola inzuzo ENKULU efinyelela ku-60% entweni ngayinye ethengiswayo. Qala ukuthengisa nge-akhawunti yakho yasebhange esendaweni, bona umhlahlandlela wethu wamahhala. I-Paxful ithola abathengi abayizi-1000 abavela e-i-Bolivia usuku ngalunye.
Ingabe wazi abantu abaningi abafuna ukuthenga i-Bitcoin e-i-Bolivia? Nge-Bitcoin Kiosk kanye Nohlelo lwenxusa uzuza-2% ekuhwebeni ngakunye phakade ngokwabelana nje ngelinki. Qala manje.